10 ရုပ်ရှင်နှင့်စက်တင်ဘာလအတွင်းကသူတို့ဆုတ်ခွာမတိုင်မီ Netflix အပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့ရှိုး - BGR - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment စက်တင်ဘာလအတွင်းကသူတို့ဆုတ်ခွာမတိုင်မီ Netflix အပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့ "10 ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲ - BGR
စက်တင်ဘာလအတွင်းကသူတို့ဆုတ်ခွာမတိုင်မီ Netflix အပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့ 10 ရုပ်ရှင်နှင့်ပြပွဲ - BGR
Tele RELAY တစ်ခု 23 သြဂုတ်လ 2019
စက်တင်ဘာလ Netflix ဟာအဘို့ကြီးစွာသောတစ်လဖြစ်ပါတယ်။ မသာသစ်ကိုထုတ်ပြန်၏ရွေးချယ်ရေးက (များစွာကိုပျေါလှငျဆက်ဆက်ရှိပါတယ်ပေမယ့်) အတော်လေးစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ဝန်ဆောင်မှုထွက်ခွာထုတ်လွှတ်မှုနှင့်ရုပ်ရှင်ကျနော်တို့လက်ခံရရှိသည့်ပြပွဲနှင့်ရုပ်ရှင်ထက်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။
ငါ့ပိုက်ဆံအဘို့, အကြီးမြတ်ဆုံးအရှုံး Netflix ဟာစက်တင်ဘာလခံရကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည် The Dark Knight ဟာ ပေမဲ့ Batman စတင် အနီးကပ်ဒုတိယဖြစ်ပါတယ်။ ရုပ်ရှင်, DC ကောင်းသောစဉ်အခါသတိမရကြသလော ငါတို့သည်လည်းသုံးကာတွန်းဒစ္စနေးဂန္ဆုံးရှုံး: ဟာကြူလီ ဝှားမုလန် et Pocahontas ။ ဒစ္စနေး + ညာဘက်မြစ်ပေါ်မှာ (ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး), ဒါကြောင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါဟာစိတ်ပျက်စရာပါပဲ။ နောက်ဆုံးငါတို့သည်လည်းငါးရာသီဆုံးရှုံး Portlandia ကြောင်းတောက်ပနှင့်ရယ်စရာဖြစ်ပြီးသင်ကစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ဤတွင်ဆယ်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားစက် Netflix ဟာလာမည့်လတွင်ဖြန့်ချိမည်ကိုပြသထားတယ်သူတို့ကျဆင်းသွားပါလိမ့်မည်သည့်အပေါ်ရက်စွဲဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျရှေ့တျော၌မကြည့်ဘူးလျှင်, သင် Netflix ဟာအပေါ်မှာအားလုံးနောက်တဖန်သူတို့ကိုမြင်စေခြင်းငှါ
သငျသညျ Netflix ဟာနောက်လပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်မည်ဟုအပြည့်အဝအကြောင်းအရာများနှင့်တပြိုင်နက်, သင်ကြည့်ယူနိုင်ပါသည် ။ ရုပ်ရှင်များ, ရှိုးများနှင့်အထူးများ၏ပြည့်စုံသောစာရင်းစက်တင်ဘာလအတွက် Netflix ဟာထည့်သွင်း သူတို့ကိုအစားထိုး။ သငျသညျမူလစျေးနှုန်းပိုနှစ်သက်ပါလျှင်, ငါတို့သည်လည်းရှိ Netflix ဟာကနေအားလုံးမူရင်းဇာတ်ကားနဲ့စီးရီးများအတွက်ဖြန့်ချိရက်စွဲများအပြည့်အဝအချိန်ဇယား .
Image ကိုရင်းမြစ်: ဒဏ္ဍာရီရုပ်ပုံများ / Kobal / Shutterstock
ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ Netflix ဘားရက်နဲ့ Michelle Obama ကစီမံကိန်းကိုစည်းချက်မြန်အီလက်ထရွန်နစ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအားလက်ခံတွေ့ဆုံ - BGR
အံ့ဩခြင်း၏အဆုံးကနေအားလုံးတစ်ဦးက "က Sky ၏တိုက်ပွဲ" ဖြတ်လိုက်ပါတယ် "သေစားသေစေသော: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ" - BGR
တူးမြောင်း Plus အားနှင့် Netflix ဟာတနင်္လာနေ့မှာတစ်ဦးဖြန့်ဖြူးသဘောတူညီချက်ကိုကြေညာပါလိမ့်မယ် - ဗွီဒီယို
အိုင်ဗရီကို့စ်: Gbagbo ICC ကိုရန်ဖြစ်နိုင်သမျှအယူခံအပေါ်ယနေ့ fixed - JeuneAfrique.com
ကျန်းမာရေး PLUS MAG - သံပုရာအစားအသောက်များတွင်တစ်လ (အပြည့်အဝ menu က) တွင် 10 ကီလိုဂရမ်ဆုံးရှုံးဖို့လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်
ASSE: ဒီတစ် caucheVAR ဖြစ်ပါသည်, သူပင်ပန်းပါ! - ခြေလျင် 01
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်4,483